Isilinganiso: Ukugcinwa Kwemininingwane ebhokisini! | Martech Zone
Isilinganiso: Ukugcinwa Kwemininingwane ebhokisini!
NgoLwesibili, Okthoba 20, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lokhu kungahle kube yi-geeky, techy, iposi kodwa ngivele ngabelana ngakho nawe. Enye yezinjongo ze Martech Zone ihlinzeka abantu ngolwazi kwezobuchwepheshe kanye nokumaketha - ngakho-ke uzobona okuthunyelwe okuhle kubuchwepheshe ekuxubeni ngezikhathi ezithile.
Uma lokhu okuthunyelwe kuqala ukufunda njengeKlingon, vele ukudlulisele ku-CIO yakho. Ngiyaqiniseka ukuthi uzohlabeka umxhwele!
Namuhla ntambama ngibe nenjabulo yokuhambela umhlangano no I-Scale Computing, isingathwe nguDoug Theis kanye Izikhungo zeLifeline Data. Bengifuna ukufunda kabanzi nge-Scale Computing ngemuva kokuthi ngifunde izindaba ngonyaka odlule zokuthi bathole ama- $ 2 million kwa-21st Century Fund.
Kube nokukhononda embonini lapho iScale iphumelela… kwazise iziqalo eziningi zinqatshiwe kanti abanye abanukayo bakwazile ukudlula ku-fund gauntlet engama-21. Isikali sasingeyona neze ubuchwepheshe in I-Indiana… bathutha lapha. Lokho kuyizindaba ezinhle - futhi ngokungangabazeki iSikali sizohlomula ngentela ephansi, umkhakha wezobuchwepheshe obuqinile kanye nomholo ongabizi lapha e-Indiana.
Lokho kusho ukuthi, kungumkhiqizo othokozisayo owenziwe yiSikali. Eminyakeni engama-20 edlule, ngaphatha inethiwekhi ye-OS2 eneziphakeli ezingafuneki kanye nokuhlelwa kwamadiski e-RAID. Ukuqinisekisa ukuthi uhlelo luhlala lukhona, bekuyibutho lansuku zonke lokuhlola nokujikeleza amadrayivu, ukwakha kabusha amadrayivu, nokuba nemishini 'yokulinda eshisayo' ngomumo. Kwakuyiphupho elibi - futhi kwakugcwele amaphuzu owodwa okwehluleka ayehlala eyinkinga.
Isitoreji Esihlanganisiwe Esihlakaniphile (ICS) yi-Scale Computing muhle kakhulu.
Njengoba uBryan Avdyli weScal asho, “Isitoreji besingakaze sibe 'yinhle' isikhathi eside!”. I-Scale Computing ithuthukise i-hardware eshintsha izinto eziningana esikhungweni sedatha esimaphakathi. Ngokuvamile namuhla, ukuhlanganiswa okuphethwe kusebenzisa ama-node wesilawuli ngokuhlangana okusebenzayo. Lokhu kwethula iphuzu elilodwa lokwehluleka futhi akuvumeli ukusebenza kweqiniso okungafinyeleleki noma ukufinyelela kwendawo yonke. Ngemuva kweminyaka eyishumi, ukucushwa okuningi kusasebenzisa ubudlelwano besigqila esiyinhloko futhi kungumnikazi. Lokhu kukhuphule intengo yesitoreji esiphethwe… futhi inkampani emaphakathi eyidingayo ayinakukwazi ukuthola isisombululo esikhulu sokugcina.
Isikali sithathe ubuchwepheshe be-IBM obuyinkimbinkimbi sabunciphisa saba yunithi eyodwa. Isikali yisixazululo seqoqo elihlakaniphile lapho kutholakala khona i-node ngayinye, futhi ngayinye isebenza njengeyunithi eyodwa. Uma i-node eyodwa noma idrayivu yehluleka, isiqalisi siqondiswa ngokuzenzakalela kwenye i-node. Ukwehluka kulula futhi akunamkhawulo. Isixazululo sesitoreji esiphansi esingaba yi-SAN / NAS, isifinyezo, ukuhlinzekwa okuncane, njll. Ukuphindaphinda kwakhiwe ngaphakathi! Uhlelo lungakhuphukela ku-2,200TB (nangaphezulu) futhi lungasetshenziswa ekugcineni idatha yasendaweni noma ekude. I-iSCSI & VMWare iSCSI Multipathing nayo yakhelwe ngaphakathi ngokusekelwa kwezivumelwano ze-iSCSI, CIFS, ne-NFS.
NgesiNgisi, lokhu kusho ukuthi inkampani yakho ingathenga isixazululo se-3TB ngaphansi kuka- $ 12k bese siyixhuma. Izinsizakalo zakho zamanje zingagcinwa zisebenza futhi nedatha ithuthwa - noma usandisa amandla akho, unciphisa isikhathi sokuphatha ngo-75%. Njengoba unwebisa uhlelo futhi awudingi ukungeza amalayisense angeziwe.
Ubuchwepheshe obuhle obuhle kakhulu obungashintsha izindleko nokukhula kwemboni yokugcina idatha. Kuzofanele ngivume ukuthi isibonelelo esingu- $ 2 million esikhwameni sama-21 mhlawumbe kube yisinqumo esihle sale nkampani. Engikukhathazayo nje ukuthi kungekudala bazothengwa kanjani yinkampani enkulu… ngethemba ngemuva kokuthi sebethuthele lapha futhi baba nomthelela kwezomnotho!
Tags: ukuthembeka komkhiqizoukuthengisa okuqondileukunakwa komfundiizinkundla zokuxhumana crmukulinganiswa kwezokuxhumanaukuhlela ezokuxhumukuhlangana kwezinkundla zokuxhumana
Isifundo Esisha Sokusetshenziswa Kwemidiya Sabathengi Sikhishiwe
Cindezela 1 Uma Unebhajethi
I-Oct 21, i-2009 ku-3: i-50 PM
Sawubona Douglas, ngiyethemba uzokujoyina umculo, iziphuzo, i-wi-fi + nerd-speak
kwa-Blogger Anonymous ngoLwesine, Okthoba 22, 5-7PM e-Indianapolis Museum of Art
I-RSVP bese uthola eminye imininingwane lapha: http://www.facebook.com/event.php?eid=15997455071...